Ikamelo elilala abantu ababili-e-Ensuite ne-Bath-Garden View - I-Airbnb
Ikamelo elilala abantu ababili-e-Ensuite ne-Bath-Garden View
Folkling, Moselle, i-France
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Raphael
U-Raphael, u-Jonathan no-JFK bazokukwamukela endlini yendabuko ye-lorraine, endaweni efudumele nasemaphandleni. Abanikazi bazokwamukela ngenjabulo enkulu futhi bakumema ukuthi unambithe itafula d 'hôte elenziwe ngemikhiqizo yendawo.
ubusuku obungu-7 e- Folkling
U-Raphaël, u-Jonathan no-Jfk bazokukwamukela endlini yendabuko ye-Lorraine, esendaweni efudumele nasemaphandleni. Abanikazi bazokwamukela ngenjabulo enkulu futhi bakumema ukuthi unambithe ukudla etafuleni labo d 'hôtes okwenziwe ngemikhiqizo yendawo.
Bonjour je me présente Raphaël et nous accueillons aussi des personnes dans notre établissement.
Woza futhi ujabulele ukunethezeka kwale ndlu yezivakashi esanda kulungiswa ukuze uphumule. Kusuka ngaphandle, ivelele ngombala wayo ogqamile futhi ngaphakathi, inesitayela sesimanje nesingavamile. Unokukhetha phakathi kwekamelo eliphakeme labantu abangu-2, Ikamelo le-Lorraine labantu ababili, ikamelo lase-Afrika labantu abangu-3, kanye negumbi lomndeni labantu abangu-8!
Kulabo ababhukha ikamelo, isidlo sasekuseni se-buffet sikulindile njalo ekuseni ngemva kobusuku bokuphumula. Leli yithuba lokunambitha ukudla okwenziwe ekhaya nemikhiqizo yendawo. Nambitha ukunambitheka okuhle ukuze ujabulise ukunambitheka kwakho ngesimo esihle nokuvumelana.
Ukuze wenze ukuhlala kwakho kube mnandi ngangokunokwenzeka, ungachitha izikhathi zenhlalakahle kwi-spa. Endaweni ezungezile, ungajabulela ukuhambahamba endaweni enhle yayo yonke imibala. Vakashela imnyuziyamu Yami e-Petite-Roselle, isigodlo sase-Schlossberg e-Forbach, i-citadel yase-Bitche, indawo eyayikade ingeyami noma iya emgqeni we-Maginot we-Simserhof.
I-La Villa la Lorraine iphinde ibe isakhiwo esiphendula imvelo esizibophezele ekuvakasheni okusimeme.
Woza futhi ujabulele ukunethezeka kwale ndlu yezivakashi esanda kulungiswa ukuze uphumule. Kusuka ngaphandle, ivelele ngombala wayo ogqamile futhi ngaphakathi, inesitayela sesimanj…
Inombolo yepholisi: 83284360100010
Hlola ezinye izinketho ezise- Folkling namaphethelo